Apple Pay oo Maanta laga heli karo Qatar | Waxaan ka imid mac
Apple Pay ayaa hadda laga heli karaa Qatar maanta
Apple Pay ayaa yimid Qatar. Adeegga lacag bixinta Apple Pay wuxuu sii wadaa socodkiisa adduunka oo dhan wuxuuna maanta si rasmi ah ugu imanayaa dadka isticmaala kaararka QNB (Bangiga Qaranka Qadar). Waqti yar gudahood Apple Pay wuxuu ku fidaa dalal badan Qadar ayaana ugu dambeysay inay ku biirto liiska. Helitaanka habkan lacag -bixinta ayaa QNB lafteeda ku shaacisay war -saxaafadeed ay ku muujineyso faa'iidooyinka lacag -bixinta iyada oo loo marayo NFC iyada oo la adeegsanayo Apple Pay.
Amniga, xawaaraha iyo nabada maskaxda ee lacag bixinta
Kuwani qiyaas ahaan waxay noqon doonaan qaar ka mid ah doodaha bixinta lacag bixinta iyadoo la adeegsanayo habkan Apple, laakiin waxaan ognahay inay jiraan habab kale oo suuqa ka jira. Bizum, tusaale ahaan, dalkeenna wali waa midka ay doorteen inta badan isticmaaleyaasha si ay u kala bixiyaan lacago u dhexeeya isticmaaleyaasha, wax malaayiin qof ayaa ku samayn kara Apple Pay Cash laakiin kiiskan lagama helo dalkeena. Way iska cadahay in bangiyadu aysan ku jirin ganacsiga doorbidida imaanshaha Apple Pay Cash marka ay leeyihiin hab u gaar ah, kiiskan Bizum.
Arrintan dhinac iska dhaaf, waxaan oran karnaa taas QNB waa mid ka mid ah hay'adaha maaliyadeed ee ugu weyn gobolka waxayna si wadajir ah ula shaqaysaa dhowr farac oo ka tirsan 31 dal oo deris ah, taasoo ka dhigaysa "af wanaagsan" suuqa lacag -bixinta NFC. Apple waxay ku sii socotaa ballaarinta mana u muuqato inay doonayso inay joojiso hadda, waa hal adeeg oo dheeri ah oo loogu talagalay isticmaaleyaasha oo caqli -gal ah shirkadda Cupertino waxay leedahay dhammaan danaha adduunka oo dhan inay caan noqoto intii suurtagal ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Apple Pay ayaa hadda laga heli karaa Qatar maanta
Gurman wuxuu saadaaliyay laba dhacdo oo Apple ah ka hor dhammaadka sanadka